EyeThupha 3, 2018 admin
UMnini NYSE luqalisa Bakkt crypto exchange & isisombululo onelungelo
Bitcoin abanokuba esengozini ligqobha njenge lwemali esiqhelekileyo. Ubuncinane yiloo injongo siqalo ukuba kungekudala iza kuphehlelelwa ngomnye wabadlali zinamandla kwi Wall Street, Ngoncedo ukusuka ezinye iinkampani eziphambili waseMerika kuquka Microsoft kunye Starbucks (ngubani uceba ukusebenzisa iqonga omtsha ukuba bayazamkela iintlawulo BTC.) Ngale ntsasa Intercontinental Exchange-elo sondo yorhwebo engumnini New York Stock Exchange kunye nezinye jikelele zemarike-isaziso ukuba sisenziwa inkampani entsha ebizwa Bakkt.
Iphulo elitsha, apho kulindeleke ukuba ethule ngoNovemba, uya kunikela inkunzi emarikeni federally kulawulwa for Bitcoin. Yaba kukudala Bakkt, ICE ijolise ukuguqula Bitcoin ibe yelizwe jikelele uphathiswa nokusetyenziswa ebanzi. Kusungulwa ukuze zizuze Bakkt iya kuba ukwenza Bitcoin isandi kunye nomnikelo ezikhuselekileyo kumalungu isitshixo ngoku ubukhulu becala aziphephe amaziko zemali yikulu-ehlabathini. Injongo kukuba ukucima indlela abaphathi ezinkulu imali ukunika Bitcoin funds mutual, imali yomhlalaphantsi, kunye ETFs, njengoko ulawulwa kakhulu, utyalo eziqhelekileyo.
iingxelo eqinile ukuhlaziya Data “ixabiso loshishino” of blockchain ukufikelela $ 2T ngu 2030
IHS Market, a fintech ukuhlaziya data beqinile, ngoJulayi ingxelo yangaphambili kobugcisa blockchain ekhokelela “inani msebenzi ishishini” of $2 zezigidi ngo 2030. the umbiko kuquka zonke inani blockchain wongeza nje sonke i nkqo (hayi iminqwazi market lwemali ethile). Nangona ingxelo bajula lezabelo granular zexabiso blockchain, kuquka "... udliwano yophando ephambili kunye neengcali blockchain qhinga," $2 yezigidigidi kubonakala ukuba inani endala njengonyaka 2030 yindlela elide kude, nabo phakathi 2017 inkunzi run, umsebenzi market babesondele ekufikeleleni $1 yezigidigidi.
Ngaphezu, izicelo blockchain ikhulela. Oku kuquka frenzy patent oluqhubekayo kunye nobambiswano kunye namashishini kuwo phantse onke amacandelo oshishino. Umthamo ukwanda patents sisalathisi wokwamkelwa enkulu kumashishini lweshishini.
Ngokwe ngxelo, amacandelo aphambili uqhuba ixabiso ishishini blockchain zibandakanya:
Iibhanki kunye namanye amaziko
abaxhobisi chain Supply kunye namalungiselelo
Intengiso kunye media iinkampani
amaziko karhulumente kunye necandelo likarhulumente
Iinkampani Power namandla
Ngemiyinge emincinci kunye e-commerce
iingcali Software kunye nabakhi
baqhubi Telecom and MNOs
amalungelo awodwa omenzi wechiza umdla kuqhubeka ukuba niyinikele izicelo ezizodwa ukuba ubuchwepheshe. Mpo engafani kakhulu 2030 emva uguquguquka shishino kunye sakhula. Oku kuya kuthetha ukuba imisebenzi emininzi kunye neendidi zemisebenzi ukuba asikwazi sase- ku 2018.
Ingxelo Daily Market Kraken for 02.08.2018
$108M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
kutshanje, Japan held a blockch...
abasemagunyeni Korean abafumani uyagula ...
Post Previous:Blockchain News 02.08.2018
Post Next:Blockchain News 06.08.2018
THIS CRAZY SECRET Shows BITCOIN WILL BE WORTH $15 ngesigidi 2030 – BTC HODLERS Will Be WEALTHIEST!
Isilimela 19, 2019
Isilimela 18, 2019